Joshụa 7 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ndị E-aị meriri ndị Izrel (1-5)
Ekpere Joshụa kpere (6-9)
Mmehie mere e ji merie ndị Izrel (10-15)
A gbara ihe Ekan mere n’anwụ, jiri nkume tụgbuo ya (16-26)
7 Ma, ndị Izrel erubereghị Chineke isi n’ihe gbasara ihe a ga-ebibi ebibi. Ekan+ nwa Kamaị, nwa Zabdaị, nwa Zira, onye si n’ebo Juda, weere ụfọdụ n’ime ihe ndị a ga-ebibi ebibi.+ Ihe a mere ka Jehova wesa ndị Izrel iwe.+ 2 Mgbe ihe a mechara, Joshụa si na Jeriko zipụ ụmụ nwoke ụfọdụ ka ha gaa E-aị.+ Obodo a dị nso na Bet-evin. Ọ dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Betel.+ Joshụa gwara ha, sị: “Gaanụ nyopụta otú ala ahụ dị.” Ha wee gaa nyopụta otú E-aị dị. 3 Mgbe ha lọghachikwutere Joshụa, ha gwara ya, sị: “Ndị agha niile ekwesịghị ịga agha a. Ihe dị ka puku mmadụ abụọ ma ọ bụ puku mmadụ atọ ezuola imeri ndị E-aị. Ha dị mmadụ ole na ole. Ọ baghị uru iziga ndị agha niile ebe ahụ.” 4 Ihe dị ka puku mmadụ atọ (3,000) n’ime ndị agha ahụ gaziri ebe ahụ, ma ndị E-aị pụtara chụwa ha, ha agbawa.+ 5 Ndị E-aị gburu ihe dị ka mmadụ iri atọ na isii n’ime ha, sikwa n’ihu ọnụ ụzọ ámá obodo ha chụrụ ha ruo Shebarim.* Ha nọkwa na-egbu ha ruo ná mkpọda ugwu obodo ahụ. N’ihi ya, obi wụnyere ndị Izrel n’afọ.* 6 Joshụa na ndị okenye Izrel wee dọwaa uwe ha, gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala n’ihu Igbe Jehova ruo mgbede. Ha nọkwa na-awụ ájá n’isi ha. 7 Joshụa wee sị: “Ewoo, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova, ọ̀ bụ ka i nyefee anyị n’aka ndị Amọraịt ka ha bibie anyị mere i ji mee ka anyị gafee Osimiri Jọdan? Ọ gaara akara anyị nnọọ mma ma a sị na anyị ka nọ n’ofe nke ọzọ nke Osimiri Jọdan.* 8 Jehova gbaghara m. Gịnị ka m ga-ekwu ebe ọ bụ na ndị Izrel agbaarala ndị iro ha ọsọ? 9 Ọ bụrụ na ndị Kenan na ndị ọzọ anụ ya, ha ga-agba anyị gburugburu, meekwa ka a gharazie ịnụ aha anyị n’ụwa a. Oleezi otú ị ga-esi mee ka a na-anụ aha gị dị ebube?”+ 10 Jehova wee sị Joshụa: “Bilie! Gịnị mere i ji kpudo ihu n’ala? 11 Izrel emehiela. Ha emebiela ọgbụgba ndụ m+ nke m gwara ha emebila. Ha weere ụfọdụ n’ime ihe ndị a ga-ebibi ebibi.+ Ha zuuru+ ha, zookwa ha ebe ha na-edowe ihe.+ 12 N’ihi ya, ndị Izrel agaghị emerili ndị iro ha. Ndị iro ha ga-achụwa ha. Ha ga-atụgharịkwa, gbaa ọsọ, n’ihi na ha bụzi ndị a ga-ebibi ebibi. Agaghị m anọnyere unu ọzọ ọ gwụla ma ùnu bibiri ndị e kwesịrị ibibi n’ime unu.+ 13 Bilie, mee ka ndị m dị nsọ.+ Gwakwa ha, sị, ‘Dịrịnụ nsọ echi, n’ihi na Jehova bụ́ Chineke Izrel sịrị: “Ndị Izrel, e nwere ụfọdụ n’ime unu e kwesịrị ibibi ebibi. Unu agaghị emerili ndị iro unu ruo mgbe unu bibiri ha. 14 N’ụtụtụ, unu ga-agbakọta n’ebo n’ebo. Ebo nke Jehova ga-ahọrọ+ ga-abịa nso n’ọnụmara n’ọnụmara. Ọnụmara nke Jehova ga-ahọrọ ga-abịa nso n’ezinụlọ n’ezinụlọ. Ezinụlọ nke Jehova ga-ahọrọ ga-abịa nso, nwoke ọ bụla n’otu n’otu. 15 Onye ọ bụla a chọpụtara ji ihe ahụ a ga-ebibi ebibi, a ga-egbu ya na ndị nke ya niile, gbaakwa ha ọkụ,+ n’ihi na o mebiela ọgbụgba ndụ+ Jehova, zuzuokwa ezigbote nzuzu n’Izrel.”’” 16 Joshụa wee bilie n’isi ụtụtụ, gwa ndị Izrel ka ha bịa nso n’ebo n’ebo. Mgbe ha bịara, Chineke* ahọrọ ebo Juda. 17 Ọ gwara ezinụlọ niile dị n’ebo Juda ka ha bịa nso, ha abịa, Chineke ahọrọ ezinụlọ Zira.+ E mechaa, ya agwa ezinụlọ Zira ka ha bịa nso, nwoke ọ bụla n’otu n’otu, ha abịa, Chineke ahọrọ Zabdaị. 18 N’ikpeazụ, ọ gwara ezinụlọ Zabdaị ka ha bịa nso, nwoke ọ bụla n’otu n’otu, ha abịa, Chineke ahọrọ Ekan nwa Kamaị, nwa Zabdaị, nwa Zira, onye ebo Juda.+ 19 Joshụa wee sị Ekan: “Nwa m, biko, kwanyere Jehova bụ́ Chineke Izrel ùgwù ma kwupụtara ya mmehie gị. Biko, kọọrọ m ihe i mere. Ezorola m ya.” 20 Ekan wee sị Joshụa: “N’eziokwu, ọ bụ mụnwa mehiere Jehova bụ́ Chineke Izrel. Lekwa ihe m mere. 21 Ahụrụ m ọmarịcha uwe si Shaịna+ n’ime ihe ndị dị n’obodo ahụ. Ahụkwara m narị shekel* ọlaọcha abụọ na otu mkpirisi ọlaedo, nke dị shekel iri ise n’arọ. Mgbe m hụrụ ha, ha gụrụ m agụụ, mụ achịrị ha. Ezoro m ha niile n’ime ala n’ụlọikwuu m. Ego ahụ dịkwa n’okpuru uwe ahụ.” 22 Ozugbo ahụ, Joshụa zipụrụ ndị ozi, ha agbara ọsọ gaa n’ụlọikwuu ahụ, hụ na e zoro uwe ahụ n’ụlọikwuu ya. Ego ahụ dịkwa n’okpuru uwe ahụ. 23 Ha wee si n’ụlọikwuu ahụ chịpụta ha, chịtara ha Joshụa na ndị Izrel niile ma wụsa ha n’ihu Jehova. 24 Joshụa na ndị Izrel niile wee kpọrọ Ekan+ nwa Zira, chịrịkwa ọlaọcha ahụ na ọmarịcha uwe ahụ na mkpirisi ọlaedo ahụ,+ kpọrọkwa ụmụ ya ndị nwoke na ụmụ ya ndị nwaanyị, kpụrụkwa ehi ya na jakị ya na ìgwè ewu na atụrụ ya, burukwa ụlọikwuu ya na ihe ya niile, rute na Ndagwurugwu Ekọ.+ 25 Joshụa wee sị ya: “Gịnị mere i ji kpatara anyị ọdachi?*+ Jehova ga-akpatakwara gị ọdachi taa.” Ndị Izrel niile wee tụọ ha nkume,+ mechaakwa gbaa ha ọkụ.+ Otú a ka e si jiri nkume tụgbuo ha niile. 26 Ha tụkọtakwara ikpo nkume n’elu Ekan. Ọ dịkwa ebe ahụ ruo taa. Iwe Jehova dajụziri.+ Ọ bụ ya mere e ji akpọ ebe ahụ Ndagwurugwu Ekọ* ruo taa.
^ Shebarim pụtara “Ebe E Si Egwute Okwute.”
^ Na Hibru, “obi ndị Izrel gbazere.”
^ Ya bụ, n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan.
^ O nwere ike ịbụ, “Joshụa.”
^ Ekọ pụtara “Ọdachi; Nsogbu.”